तपाईं एक गुरु एक्सेल बनाउन 20 चाल
कम्प्युटर मा काम गर्ने हरेक व्यक्ति, उहाँले कसरी एक्सेल मा काम गर्न थाह कि उसलाई सोध्न भने, सकारात्मक जवाफ दिन। तर, तपाईं प्रश्न अर्को तरिका राख्न र कसरी राम्रो पत्ता लगाउन प्रयास भने, यो को बहुमत भ्रम पैदा हुनेछ। तर त्यहाँ सामना गर्न सक्षम हुन सक्छ? वास्तवमा, यो कार्यक्रम एक विशाल तपाईं बस ध्यान नगर्ने, रहस्य रकम भण्डारण गर्दछ। तर तपाईंले तिनीहरूलाई बारेमा थाहा छ भने, तिनीहरूले तुरुन्त आफ्नो सबैभन्दा मनपर्ने हुन्छन्। त्यसैले, यस लेखमा तपाईंले "Eksele" मा बारेमा बीस फरक चाल सिक्न हुनेछ सबैलाई थाहा हुनुपर्छ कि।
बस एक क्लिक संग सबै चयन
क्षेत्र माथिल्लो बायाँ कुनामा कुनै एक सामान्यतया प्रेस छैन जो एउटा बटन छ। र यो अनुमति दिन्छ रूपमा एक-क्लिक हालको कागजातको सबै कक्षहरू चयन, धेरै उपयोगी छ।
धेरै फाइलहरू खोल्दै
डाटा प्रोसेसिंग - यो यो कार्यक्रम को मुख्य विशेषता छ, तर तपाईं फाइलहरू दर्जनौँ भने के के, तपाईंले प्रयोग गर्नुपर्ने प्रत्येक? साँच्चै यो अलग तिनीहरूलाई प्रत्येक खोल्न आवश्यक छ? वास्तवमा, त्यहाँ तपाईं कार्य छिटो सामना गर्न अनुमति दिन्छ कि एक चाल छ। तिनीहरू सबै तिनीहरूलाई बीच कुनै द्वन्द्व संग खुला - तपाईं आवश्यक सबै फाइलहरू चयन गर्नुहोस् र प्रविष्ट गर्नुहोस् थिच्नुहोस्।
तपाईं कागजात को एक ठूलो संख्या काम गर्दा धेरै स्वयं तिनीहरूलाई बीच स्विच गर्न आवश्यकता रीस उठाउनु गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईं आफ्नो जीवन कुञ्जी संयोजन गर्न Ctrl + ट्याब, स्वचालित अर्को ट्याबमा तपाईँले स्विच जो प्रयोग गरेर सजिलो बनाउन सक्छ।
यी मात्र विकल्प शीर्ष मेनुबाट कार्यक्रम उपलब्ध छन् - धेरै "सुरक्षित", "अगाडि" र "पछाडि" भन्ने विश्वास गर्छन्। तर तपाईं पनि एक विशेष ब्लक सेटिङ मार्फत कार्य कुनै पनि नम्बर थप्न सक्नुहुन्छ - लेबल प्रदर्शित छन् बस सम्झना मात्र दुई - बाँकी लुकेको गरिनेछ।
सेल मा विकर्ण लाइन
कहिलेकाहीं तपाईं सेल विकर्ण लाइन जानकारी साझेदारी गर्न यसलाई परिमार्जन सेट गर्न, आवश्यक छ। तर कसरी के गर्ने? सबै कक्षहरूको सीमाहरु परिभाषित गर्न सक्षम छन्, तर तपाईं "थप सीमा" मा क्लिक गर्नुहोस् यदि तपाईं मात्र एक विकर्ण लाइन, तर पनि अन्य आश्चर्य हुनेछ।
थप पङ्क्ति वा स्तम्भहरू थप्ने
सबैलाई कक्षहरूको एक पङ्क्ति वा स्तम्भ कसरी थप्न थाह छ। तर केही टुक्रा अलग थप्न - यो एक वास्तविक डरलाग्दो सपना हो। त्यसैले, तपाईं राम्रो को पङ्क्ति वा स्तम्भहरू इच्छित संख्या अनुरूप हुनेछ कक्षहरूको इच्छित संख्या चयन चाहन्छु, र त्यसपछि मानक सञ्चालन दोहोर्याउनुहोस्।
छिटो डाटा स्थानान्तरण
के तपाईं चाँडै सार्न डाटा को एक स्तम्भ चाहिएमा? यो गर्न, यो त खुला स्तम्भ सामग्रीहरू सार्न, क्रस आकारको तीर को रूप लिन्छ सम्म, स्तम्भ को किनारा गर्न कर्सर सार्न।
खाली कक्षहरूको हटाउने
प्रक्रिया मा, अक्सर त्यहाँ कागजातको उपस्थिति बिगार्छ कि खाली कक्षहरू, एक ठूलो संख्या छ। तपाईंले एक द्वारा तिनीहरूलाई मेट्न सक्नुहुन्छ - वा द्रुत तरिका प्रयोग गर्नुहोस्। यसो गर्न, तपाईं वस्तु "सबै" चयन रद्द फिल्टर र "खाली" चयन गर्न आवश्यक हुनेछ - त्यो तत्काल खाली कक्षहरू भनेर एक क्लिकमा हटाउन सक्नुहुन्छ कागजात सबै चयन।
सबैलाई छिटो खोज कसरी प्रयोग गर्ने थाह, तर तपाईं सटीक मिलान, र एक वा बढी अक्षरहरू को परिणाम खोजी गर्न सक्दैन भन्ने तथ्यलाई सजग केही मान्छे। एक पत्र खोजी गर्न, तपाईं खोज पट्टी मा आवश्यक प्रश्न चिन्ह प्रविष्ट गर्न, र तपाईं धेरै अक्षरहरू प्रविष्ट गरेर खोजी गर्न चाहनुहुन्छ भने - एक फुली प्रयोग गर्नुहोस्।
एक अद्वितीय मूल्य सिर्जना
धेरै मानिसहरू फिल्टर प्रयोग गर्नुहुन्छ, तर यो लगभग उन्नत खण्डमा हेर्न कहिल्यै। तर यो संग, तपाईं एक अद्वितीय मूल्य एक विशेष सेल लागि, तपाईं कामको लागि वा अन्य उद्देश्यका लागि यो आवश्यक छ भने निर्दिष्ट गर्न सक्नुहुन्छ।
जानकारी को विशिष्टीकरण
सबैलाई तपाईं कक्ष मा प्रवेश गरिनेछ के जानकारी सीमा सेट गर्न सक्नुहुन्छ थाह छ। उदाहरणका लागि, तपाईं घटनामा आमन्त्रित मानिसहरूको सूची सिर्जना भने, र आफ्नो उमेर 18 60 वर्ष पुरानो (केवल सारा संख्या) बाट दायरामा गर्न सक्नुहुन्छ, त्यसपछि यी विकल्पहरू दुवै तपाईं मेनु "डाटा" बाट चयन गर्न सक्नुहुन्छ र त्यसपछि अन्य मान बस छैन स्वीकार गरिनेछ ।
कागजात पृष्ठ मार्फत द्रुत नेभिगेसन लागि, तपाईं तीर संग Ctrl कुञ्जी प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईं यो संयोजन प्रयोग गर्नुहुन्छ भने, तपाईं अन्तिम विन्दु जानकारी कक्षहरू पुग्न छौँ।
कहिलेकाहीं यो एक पङ्क्ति, वा विपरित मा स्तम्भ खोल्न आवश्यक छ। वास्तवमा, यो धेरै बस गर्न सकिन्छ। यसो गर्न, तपाईं इच्छित जानकारी प्रतिलिपि गर्न आवश्यक र त्यसपछि मेनुबाट यसलाई पेस्ट "रूपान्तरण" चयन गरेर - र आफ्नो नम्बर एक स्तम्भ प्रतिलिपि गरिनेछ।
जानकारी लुकाउन कसरी?
"Eksele" जानकारी लुकाउन क्षमता छ, तर यसलाई विभिन्न तरिकामा गर्न सकिन्छ। तपाईं कक्षमा क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ र "लुकाउनुहोस्" चयन गर्नुहोस्, तर यो द्वारा कुनै राम्रो परिणाम मतलब हुनेछ। त्यसैले यसलाई ढाँचा प्रकार ढाँचा सेल प्रयोग गर्न सिफारिस गरिएको छ ;;; - यो तपाईं prying आँखाबाट लुकेको सबैभन्दा विश्वसनीय जानकारी प्राप्त गर्न अनुमति दिन्छ।
कक्षहरू डेटा संयोजन
तपाईं धेरै कक्षहरू छ भने, र तपाईं एक तिनीहरूलाई भण्डारण गरिएका जानकारी संयोजन गर्न आवश्यक, तपाईं आवश्यक सबै पूर्ण rewritten छैन। चयन गरिएको सेलमा परिणाम, अघिल्लो व्यक्तिहरूलाई देखि सबै डाटा प्राप्त - बस आवश्यक सम्मिलित "एम्परसेण्ड" प्रतिमा को नाम बीच कक्षहरू जसमा समारोह सेट।
ठूलो गर्न सानो परिवर्तन
तपाईं एक पूर्ण राजधानी अक्षरहरू लेखिएका बनाउन एक सेल पाठ गर्न आवश्यक छ भने, तपाईँले यसलाई सक्रिय CapsLock संग पूर्ण पुन: टाइप गर्नुहोस् छैन। तपाईं बस कोष्ठकमा रूपान्तरण गर्न आवश्यक सेल कस्तो संकेत मा माथिल्लो समारोह प्रयोग गर्न आवश्यक छ।
डाटा0संग शुरू
केही अवस्थामा, तपाईं 0. दुर्भाग्यवश, पूर्वनिर्धारित, कार्यक्रम स्वतः शून्य, मात्र एक पूर्णांक मूल्य छोडेर हटाउँदछ साथ सुरु हुन्छ कि एक सेल मा डाटा प्रविष्ट गर्न आवश्यक पर्दछ। तपाईं कक्षमा को प्रारूप परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ, तर यो एक सरल प्रतिमा एकल उद्धरण प्रतिस्थापन गर्न सजिलो छ कि एक लामो प्रक्रिया छ। तपाईं आफ्नो मूल्य अगाडि राखेँ भने शून्य ठाउँमा रहनेछ।
धेरै मानिसहरू इरादा रूपमा, कि छैन डर त्रुटिहरू छाप्न, तिनीहरूले थाहा किनभने आफ्नो सफ्टवेयर ठीक हुनेछ भन्ने छ स्वत: सुधार प्रयोग गर्नुहोस्। तर धेरै केही मानिसहरू यसको कार्य सरल बनाउन यो सुविधा प्रयोग गर्न सक्ने आपत्ति आउँछन्। तपाईं आवर्ती लामो शब्द, नाम छ भने, त्यसपछि तपाईं स्वतः सच्याउने लागि शब्दहरूको सूची थप्न सक्नुहुन्छ र दोस्रो आफ्नो लेखन खर्च - र कार्यक्रम नै उचित फारम तिनीहरूलाई नेतृत्व गर्नेछन्, तपाईं सयौं पटक सट्टा आफैलाई सोध्नुहोस्।
तपाईं कम दायाँ कुनामा एक सेल चयन भने यो बारेमा जानकारी छ। तर, यो पूर्ण टाढा छ, तर तपाईं बिल्कुल सबै डाटा पहुँच प्राप्त गर्न सक्छन्। यसो गर्न, तपाईं जानकारी तपाइँको माउस होभर र दायाँ माउस बटन क्लिक गर्न आवश्यक - यो जसले सबै डाटा समावेश हुनेछ सञ्झ्याल, खोल्दछ यस विशेष कक्षमा।
पृष्ठ पुन: नामाकरण
एक केही कारणले लगभग कसैले प्रयोग गर्ने साधारण तरिका, को। अक्सर, तपाईं कागजातमा पृष्ठहरू पुन: नामकरण गर्न, र तपाईं नाममा क्लिक गर्नुहोस् कि लागि, दायाँ-क्लिक गर्नुहोस्, त्यसपछि चयन "पुन: नामाकरण" त्यसपछि नाम परिवर्तन गर्नुहोस्। तर प्रक्रिया निकै विन्डोज सर्टकटहरू र फाइलहरू संग रूपमा पृष्ठ नै सिद्धान्त प्रयोग गरेर सरलीकृत गर्न सकिन्छ। पृष्ठ को नाम मा डबल क्लिक तपाईंले सम्पादन र ढिलाइ बिना परिवर्तन गर्न तत्काल मौका दिन्छ।
"Yandex ब्राउजर" धीमा - के? कम्प्युटर भाइरस र एन्टी-भाइरस कार्यक्रम। को "Yandex ब्राउजर" कसरी सफा गर्न
विज्ञापन कसरी छाप्न? कम्प्युटर मा "वचन" को रूप मा छाडा पात संग विज्ञापन छाप्न?
पाठ कसरी छाप्न सिक्न
आफ्नो ब्राउजर अपडेट गर्न कसरी: शुरुआती लागि निर्देश
आफ्नो पुर्खा कसरी पाउन? माथि वंशावली रूखको चित्रकला
को VIN मा विकल्पहरू। "मर्सिडीज" - को VIN मा विकल्पहरू
लामो बालों वाला सेवा कुत्तों को सबै भन्दा साधारण नस्ल
एउटा सुन्दर पकवान नुस्खा - एक सलाद, "कछुवा" तयार गर्ने प्रयास
Krasnaya Polyana मा ट्राउट फारम: सेवा, सञ्चालन, कसरी प्राप्त गर्न
"एशिया Malbershteyn": ब्रान्ड को विवरण
गति रेल "PEREGRINE" को फाल्कन को तीव्र उडान संग तुलना छ
व्यापार संचार को प्रकारका। व्यापार संचार को भाषा। व्यापार संचार को मान्यता
ठाउँ - यो .. अवधारणा र स्पेस प्रकार
लगानी परियोजनाहरु व्यवस्थापन - देशको अर्थव्यवस्था सुधार गर्न एक वास्तविक मौका।